Kusungulwe uhlelo lokuhlanza idolobha | News24
Kusungulwe uhlelo lokuhlanza idolobha
UMASIPALA uRay Nkonyeni ube nomhlangano nezinhlaka ezehlukene ngenhloso lokudingida udaba lokuhlanza irenke yaseziNgolweni ngeledlule.
Lokhu kwenzeke emva kwezinhlelo eziningi ezenziwe nguMasipala waseRay Nkonyeni zokuhlangana nemiphakathi.
Ngokusho kukaMeya waMasipala waseRay Nkonyeni uNkk Cynthia Mqwebu ekhuluma esithangamini sabezindaba ebesibanjwe ngo­Lwesibili olwedlule uthe lokho sekubenze bengumkhandlu bebone kungcono ukuba beqale uhlelo olubizwa nge-Operation Hlanza Idolobha futhi bayenze khona eziNgolweni.
Uthi lolu hlelo kuhloswe ngalo ukuba kususwe izitikha ezibhalwe ngokuhu- shula izisu, ukuhlanza irenki nokuba kuqhanyukwe nohlelo lokwenza idolobha lihlale lihlanzekile ngazo zonke izikha- thi.
Okunye okubalulekile ukuthi osomabhizinisi nemiphakathi eyakhelene noma esebenzisa irenke ithole ithuba lokuba ichazelwe kabanzi ngemithetho elawula idolobha, njengoba yaphasiswa ngasekuqaleni kwalonyaka.
“Enye into ebalulekile ukwenza imiphakathi yazi futhi iqonde kabanzi ngokulahla imfucuza ezindaweni ezingavumeleki kanti lokho kuyokwenza ukuba otholakala enza lokho abhekane ngqo nomasipala.”